विराटनगर महानगरका मेयर नागेश काेइरालालाई ९ प्रश्न - Parichaya.com
विराटनगर महानगरका मेयर नागेश काेइरालालाई ९ प्रश्न
By परिचय	 On २४ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १३:४० 0
मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपछि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका नागेश कोइराला राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रमा पनि परिचित व्यक्तित्व हुन्।
सादा जीवन, उच्च विचार, शालिन एवं भद्र स्वभावका धनी उनको यही व्यक्तित्वले यस पटकको निर्वाचनमा भारी मतले विजयी भए। नगरप्रमुख कोइरालासँग रासस प्रदेश नं १ कार्यालय राससकर्मी मोहम्मद सदरुल र मनोज दाहालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
.यहाँका पिताजी स्वर्गीय कृष्णप्रसाद कोइरालाले स्थापना गरेको यो विराटनगर सहर राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व बोकेको छ, यसलाई तपाइँले कसरी कायम राख्नुहुन्छ ?
हो विराटनगर शहर स्थापना गर्नेदेखि यहाँ विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्न मेरा पिताजी कृष्णप्रसाद कोइराला र त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत धेरै अग्रजहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ । नेपालको राजनीतिमा विराटनगरको योगदान ठूलो रहेको छ ।
लामो समय स्थानीय निकाय निर्वाचन नहुँदा जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन सकेको थिएन । पछि जनप्रतिनिधि आइसकेपछि मुलुकमा कोरोनाको महामारीका कारण विकास निर्माणले गति लिन सकेन । विराटनगरको ऐतिहासिक महत्वलाई स्थापित गर्दै जनताको भावनाअनुसार विकासका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने दृढता लिएको छु ।
विराटनगर औद्योगिक नगरीको रुपमा पनि परिचित छ, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई नयाँ उद्योग स्थापनाप्रति आकर्षित गर्न कस्तो योजना बनाउनुभएको छ । यस क्षेत्रमा पहिले स्थापना भएका अधिकांश ठूला उद्योगहरु विस्थापित भएका छन् भने साना तथा लघु उद्योग करिब १३ हजार छन् ।
.काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखले फोहर व्यवस्थापन, धरान उममहानगरपालिकाका प्रमुखले पानीको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे जस्तै विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले तपाइँले के कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
यो मानवको आवश्यकताको कुरा हो, तपाइँ एउटा पसलमा जानुहुन्छ, एक गिलास पानी माग्नुहुन्छ तर पसलले मिनर वाटर किन्न भन्छ, त्यसपछि तपाई शौचालय जानु हुन्छ तपाईलाई शौचालय चाहिन्छ । अब तपाइँ खाना खानुहुन्छ वा विभिन्न वस्तु उपभोग गर्नुहुन्छ र त्यसबाट फोहर हुन्छ, फोहरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । खाना खाएर पेट भरेपछि तपाईंलाई एकछिन हरियाली चाहिन्छ, त्यसको लागि पार्क चाहिन्छ ।
एकछिन आराम गरेपछि सडकमा हिँड्नुहुन्छ, सडक अस्तव्यवस्त भेट्नुहुन्छ, सिटी सफारी पनि त्यही, गाडी पनि त्यहीँ छ, रिक्सा, ट्रक, साइकल पनि त्यहीँ छ, तपाईं सडकमा सुरक्षित महसुस गर्नु हन्न, हिँड्न सक्नुहन्न । त्यसैले सडक सुरक्षित हुनुपर्‍यो, सडकपेटीमा सुरक्षा हुनुपर्‍यो । सँगसँगै गाडीमा हिँड्नेलाई दुर्घटना हुँदैन भन्ने महसुस हुनुपर्‍यो । त्यसलै विराटनगरमा तीन वटा मात्र रुट छ ।
७०० किलोमिटर नेटवर्क सडकमध्ये २५० देखि ३०० मात्र कालोपत्र भएको देखिन्छ । अरु बाँकी सबै लथालिङ्ग छ । एसियाली विकास बैंकको कार्यक्रम पनि सीमित ठाउँमा मात्र लागू भएको देखिन्छ । विराटनगरमा अझै सडकको समस्या सँगै ढल वा नालीको पनि समस्या रहेको छ ।
.विराटनगरलाई आधुनिक सहर बनाउने चुनौती छ, यसलाई कसरी तालमेल मिलाएर लैजाने योजना बनाउनुभएको छ ?
धार्मिक र पर्यटकीयस्थलहरुमा विराटनगरको नाम पाएको विराट राजाको राजधानी भएकाले नाम यहीँबाट आएको जस्तो लाग्छ । त्यसलाई विराट राजाको पहिचान र नाम देखिने सङ्ग्रहालय बनाएर धार्मिक पर्यटनमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
विराटनगरबाट सात जना प्रधानमन्त्री बनेर जानु भएको छ । उहाँहरुको इतिहासलाई वणर्न गर्दै एउटा सङग्रहालय निर्माण गरी मुलुकभरिका नागरिकलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले दिएको योगदानको विषयमा उजागर गराउन सकिन्छ ।
विराटनगरका केशलिया र सिङ्घीया नदीमा तटबन्ध बनाउने र त्यसको माथि सडक बनाउन सकिन्छ । त्यस्तो सडक बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, दृुष्टिविहीनमैत्री, पैदल यात्रीमैत्री हुनसक्छ ।
.विराटनगर महानगरपालिकामा २०५३ सालमा शिलान्यास भएको चक्रपथले अहिलेसम्म पूणर्ता पाएको छैन्, यसलाई पूरा गर्नुपर्नेतर्फ केही सोच्नुभएको छ कि ?
विराटनगरका लागि ‘वाइपास रोड’ को निकै आवश्यक छ, एउटै सडकमा १० थरिका गाडी सञ्चालन हुने गर्दा सडक असुरक्षित छ, क्षमताभन्दा बढी मालबाहक गाडीमा सामान ढुवानी भइरहेको छ, सडक पनि भत्किरहेको छ । त्यसैले वैकल्पिक सडक निर्माणतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
झण्डै २५ वर्षअघि शिलान्यास भएको चक्रपथ के कारणले सम्पन्न हुन नसकेको यस विषयमा प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल गर्नेछु । चक्रपथ सम्पन्न हुन्छ भने गरौँ, होइन भने पूणर् रुपमा बन्द गरौँ भन्नेछु ।
हामी सानो हुँदा चक्रपथ परियोजना आएको थाहा पाएका थियौंँ तर यतिका वर्षसम्म सम्पन्न नभएपछि मैले मेरो घोषणापत्रमा अर्को करिडोर सडक बनाउने उल्लेख गरेको हुँ ।
.विराटनगर सहरलाई सफा, हरियाली एवं सुन्दर बनाउन तथा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन एवं हेर्न लायकको ठाउँ बनाउन के-के योजना बनाउनुभएको छ ?
विराटनगर सहरलाई सफा, हरियाली एवं सुन्दर बनाउन तथा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन एवं हेर्न लायकको ठाउँ बनाउन धेरै महत्वकाँक्षी योजना बनाइएको छ । विराटनगरलाई साँच्चीकै महानगर बनाउन नयाँ सिराबाट काम शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
शुरुमै दातृ निकायले सहयोग पर्खेर काम हुन सक्दैन । महानगरपालिकाका पहिले आफूमा सक्षम हुनुपर्‍यो, अनि दातृ निकायले पत्याउँछ । त्यो पत्याउने परिस्थिति निर्माण गर्ने कार्य हाम्रो हो, त्यसका लागि हामी समपूणर् टोली लागिरहेका छाैं ।
हामी आत्मनिर्भर भएपछि कोकोसँग कुरा गर्ने, कुन परियोजनालाई आगाडि बढाउने भन्ने कुरा आउँछ । प्राचीन विराटनगरलाई संरक्षण गर्ने र आधुनिक विराटनगर बनाउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ ।
.निर्वाचनताका तपाईंले जारी गर्नु भएको सङ्कल्प एवं घोषणापत्र भन्दा पनि जनताले चाहेका र माग के कस्तो रहेको पाउनु भयो ?
निर्वाचनको क्रममा मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा र अहिले विजयी भएपछि अधिकांश मतदाताको मूल चाहना भनेको कर घटाउनु रहेको छ । जस्तो कि पैतृक सम्पत्तिबाट बनाएको घरको कर रु ५० कर एक्कासी वृद्धि गरेर रु पाँच हजार बनाइएको छ ।
त्यो फरकले गर्दा कतिपयले घरको कर नतिरेको देखिन्छ, कर घटाएर नगरवासीलाई अब कर तिर्न प्रेरित गराउनु पर्ने भएको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन भए विराटनगरवासीले खोजेको सम्पूर्ण कार्य गर्न सम्भव छ । पहिले महानगरपालिका सक्षम हुनुपर्‍यो ।
वर्षायाममा नगरका कतिपय स्थानमा डुबानको समस्या छ । व्यवस्थित ढल, नालीको व्यवस्था गरेर डुबानको समस्याबाट मुक्त गराउन आवश्यक छ ।
.नगर क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
.सङ्घीय सरकारले विराटनगर महानगरपालिकालाई दिने अनुदान अरु महानगरपालिकाको तुलनामा निकै कम छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
केही वर्षअघिसम्म विराटनगर देशकै दोस्रो मुख्य शहरको रुपमा परिचित थियो, राजनीतिक परिवर्तनपछि विराटनगरबाट पाँचजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अहिले आएर नेपालको छैठाैं सहरको रुपमा पुग्नुमा सङ्घीय सरकारले नजर यहाँ नपर्नु नै मुख्य हो । विराटनगरबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भएका व्यक्तित्वले देश बनाउन लाग्नुभयो ।
आफैँ जन्मेको हुर्केको ठाउँलाई बनाउनुभन्दा देशभरिको विकासमा केन्द्रित भएकाले यस्तो भएको हो । सङ्घीय सरकारको मात्र मुख नताकी महानगरपालिका आफैँंले पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन प्रयास गर्नुपर्छ।
अब हामी रु एक अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले लागि परेका छौँ । विराटनगर सफल र सक्षम बनाउन लागिरहेको छौँ । विराटनगरको साख बचाउने उद्देश्यले कार्य गरिरहेका छौँ, यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूणर् नगरवासीको साथ र सहयोगको पनि उत्तिकै जरुरत पर्दछ ।
.अन्त्यमा विराटनगरवासीलाई केही भन्न चाहनु हुन्छ ?
मन्त्री आलेको आक्रोश- आफ्नै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरूले मेरो बदनाम गर्दैछन्